ပြည်တော်နိဗ္ဗာန်ဦးမဂ္ဂံပြည်တော်ဦးက မဂ်ရှစ်တန်ရွှေပြည်နိဗ္ဗာန်ဆိုက်ရောက်ရန်ပြည်တော်ဦးတဲ့ မဂ်လမ်းမှန်ရွှေပြည်တော်နိဗ္ဗာန်နန်းကိုလမှန်းဆမျှော်မြင်ဦးအစ မဂ်ရှစ်အင်ပြည်တော်ဦးမဂ်လမ်းစဉ်ကိုရွှေဘုန်းရှင် တွင်တွင်ပွားကြပါစို့လေး...။ အဘိဓမ္မာသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၁) ဖူဆန်း ~ pyidawoo
အဘိဓမ္မာသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၁) ဖူဆန်း
6:42 AM Pyidawoo No comments
... ၃-၉-၂၀၁၂ တနင်္လာနေ.က ဖူဆန်းမြို. ဗုဒ္ဓဘာသာ အသင်းတိုက်တွင် အဘိဓမ္မာသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၁)ကို စတင်
... တောင်ကိုးရီးယားနိူင်ငံသား အချို.သော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသည် မိရိုးဖလာ မဟာယာန အယူအဆများထက် ထေရဝါဒကို စိတ်ဝင်စားစ ပြုလာကြပါသည်။ ဝိပဿနာတရားကို လေ့လာရာမှ အစပြု၍ နိကာယ်ကြီးများကို ဘာသာပြန်သည် အထိ ခရီးရောက်နေကြပါပြီ။ ယခုအခါ အဘိဓမ္မာတရားကိုပါ စိတ်အားထက်သန်စွာ လေ့လာသူများ တစတစ များပြားလာသဖြင့် ယခင်က ဆိုးလ်မြို.တွင်သာ ပြုလုပ်နိူင်ခဲ့သော အဘိဓမ္မာသင်တန်းကို ဖူဆန်းမြို. အထိ တိုးချဲ. သင်ကြားနိူင်ခဲ့ပါပြီ။
မြန်မာပြည်မှ သာသနာပြု ရဟန်းတော်များ အနေဖြင့် ရှေ.လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်နိူင်ရန်နှင့် လိုအပ်ချက်များကို ကြိုတင်ဖြည့်ဆည်းထားခြင်းဖြင့် မိမိ် ရှေ.မှောက်ရောက်ရှိလာသည့် တာဝန်များကို စွမ်းစွမ်းတမံထမ်းဆောင်နိူင်မည့်အခွင့်ကောင်းများ ရှိနေကြောင်း အသိပေးလိုက်ရပါသည်။
Posted in: ပ
အဘိဓမ္မာသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁) ဒယ်ဂူးမြို. ကိုရီးယား